Shiinaha Puppy pads soosaarka iyo Warshadda | Bondhot
Suufyo ku habboon Tababarka Weelka
Sii eeyahaaga fursadda ugu fiican ee guusha marka ay timaado tababarka dheriga. Xirmooyinka tababarka xayawaanku waxay bixiyaan waxqabad sare iyo sahlanaan lagu kalsoonaan karo si eyda yaryar ee la jecel yahay ay wax u bartaan si dhakhso leh.
Marka lagu daro tababbarka ardayda yaryar, suufnadu sidoo kale waxay si fiican uga shaqeeyaan caawinta eeyaha jiran ama da 'weyn, eeyaha ka dhigaya kuwo raaxo leh inta lagu jiro gaadiidka, ama u siiya beddel eeyaha iyadoon loo helin marin bannaanka oo waqtigiisa ku habboon.
Cabirro badan ayaa la heli karaa: Cabbirka ugu caansan waa 22x22inches, 22x23inchs
Waxaan sameyn karnaa cabir badan sida macaamiisha looga baahan yahay.
Naqshadaynta Caddaynta 5 Lakabka
Suuf kastaa wuxuu la yimaadaa shan lakab si loo hubiyo waxqabadka caddaynta. Lakabka sare ee bakteeriyada ayaa bixisa dusha sare ee qalajinta oo qalajiya qoyaanka, xakameynaya urka, kana hortaga raad-raaca. Lakabka kor u kaca ayaa dareeraha ku sii qulqulaya jihada saxda ah, halka xudunta u eg isbuunyada ay bixiso nuugista ugu badan waxayna dareere u noqotaa jel marka la taabto. Labadii lakab ee ugu dambeeyay ee daadinta tababbarka xayawaanku wuxuu daboolaa lakabka qufulka iyo dahaadhka caagga ah ee ilaaliya - wuxuu ka ilaaliyaa inay dhulka ka dhawraan waxyeellada.
Dhisme-ku-Jira Natiijooyin Degdeg ah
Si gaar ah loogu talagalay oo lagu dhisay wax soo jiidasho leh, eeyaha ayaa loo jiidayaa suufka marka dabeecadda soo wacdo, taas oo macnaheedu yahay tababar dhaqso leh oo guul leh oo ku saabsan eeyahaaga. Si fudud u dooro meesha aad rabto eeygaagu inuu tago, fur furka, oo dhig sagxadda iyadoo caagku hoos u jiro.
Suuf tababar kasta oo xayawaan ah wuxuu ku siiyaa gargaar ku habboon eeygaaga iyo nabadda maskaxdaada adiga. Marka la isticmaalo, naqshadeynta suufka suufka iyo shaashadda caddaynta daadinta ayaa nadiifin ka dhigaysa. Si fudud u tuur suufka, oo jiifo mid cusub.
Ka caawi inaad barato eeyahaaga suufka adiga oo dul dhigaya suufka dhowr jeer maalintii. Marka eeygu si guul leh ugu dhaco weelka suufka, isla markiiba ku abaalmari amaan afka ah iyo daweyn gaar ah, ka dibna ku beddel suufka la isticmaalay mid cusub. Haddii eeyahaagu baabi'iyo meelo kale, si tartiib ah dib ugu celi suufka dhiiri gelin ahaan, marwalba adoo adeegsanaya xoojin wanaagsan (oo aan weligood diidin). Natiijooyinka ugu wanaagsan, eeyahaaga ku koob meel yar oo uu ka bilaabo, sida jikada ama musqusha.
Hore: Gabdhaha yar yar ee suufka lagu xiro
Xiga: Qashinka bisadda